Nnwom 3 NA-TWI - Ahohia bere mu anɔpa mpae - O Awurade, - Bible Gateway
Nnwom 2Nnwom 4
Nnwom 3 Nkwa Asem (NA-TWI)
3 O Awurade, nnipa bebree tia me. Nnipa pii pɛ sɛ wɔhaw me. Mewɔ atamfo bebree. 2 Bebree no ara ka se Onyankopɔn remmoa me da. 3 Nanso, Awurade, wone me kyɛm, m’anuonyam ne m’anidaso. Wo nko ara na wubetumi apagyaw me ti a masi no ase aniwu mu no.